“Maalin kuma fikirin inaan ka tagayo Real Madrid” – Gool FM
David Luiz oo shaaca ka qaaday arrin layaab leh ee ku saabsan sheekada xalay dhex martay isaga iyo Saalax
“Maalin kuma fikirin inaan ka tagayo Real Madrid”
Dajiye February 12, 2019
(Real Madrid) 12 Feb 2019. Kooxda reer Talyani ee Juventus ayaa niyad jab xoogan kala kulantay xidiga reer Brazil iyo kooxda Real Madrid Marcelo, kadib markii uu xaqiijiyay inuu xiiseenayo sii joogitaanka garoonka Santiago Bernabéu.
Marcelo ayaa dhinaca kale xaqiijiyay inuusan marnaba maalin ku fikirin ka tagista kooxda ka dhisan caasimada Spain ee Real Madrid.
Laacibka reer Brazil ayaa lala xiriirinayay xiliyadii lasoo dhaafay kooxda reer Talyaani ee Juventus, kadib marka uu furmo suuqa xagaaga ee soo aadan, sida ay xaqiijiyeen saxaafada caalamka, balse isaga oo arintan ka hadlayay ayaa wuxuu yiri:
“U dhaqaaqista Juventus? Bianconeri waa koox qaab ciyaareedkeeda uu aad u fiican yahay, waana hubaal ah inay tahay koox weyn, balse waxaan joogaa halkan Real Madrid”.
“Marnaba uma maleynayo inaan ka tagayo kooxda Real Madrid, waxaan kalsooni ku qabaa nafteyda in ka badan qof walba ee kale, kumana qasbani inaan halkan ka tago”.
“Waxaan ku kalsoonahay naftayda iyo shaqadeyda, laakiin hadii ay dhacdo, isla markaana ay maamulka kooxda Real Madrid ii muujiyaan inay ka maarmeen adeegeyga, waan bixi doonaa”.
“Balse waan ka xumaan doonaa, inkastoo aan kalsooni weyn ku qabo inaanan culeys ku noqon doonin kooxda”.
Muxuu ka yiri Frank Lampard suurtagalnimada uu ku noqon karo badalka Sarri ee kooxda Chelsea???
Xog Gaaban oo aad u baahan tahay inaad Ogaato ka hor kulanka Caawa ee Manchester United iyo PSG